Ama-Value enziwe ngokwezifiso, ama-Valves Accessories, ama-Piping Components - i-DEYE
Imboni ye-Petroleum & Chemical
I-Sea And Offshore Project
Amanzi Okuphuza Namapayipi
Uzothola Isixazululo esifanele osifunayo
Imboni yamapayipi edayi isungula imihlangano yokucobelelana ngolwazi emibili yokukhiqiza amaValves. I-DEYE valve (Wenzhou) igxila kuma-valves we-API we-Oyili negesi, i-Petrochemical ne-Sea Water. I-DEYE Valve (Hebei) Gxila kuma-valve ekwelashweni kwamanzi nokusetshenziswa kwamapayipi. Ivelufa Yamanzi Okuphuza Inesitifiketi esivunyelwe se-WRAS.
Phezulu Ukungena Ball Valve
Okugcwele ashiselwe wangcwatshwa ibhola valve
I-Double Block ne-Bleed valve
Valve FOR PETROLEUM KANYE INDUSTRY INDUSTRY
Ama-valve aklanywe yi-API afaka ama-valve esango, ama-valve wokuhlola, ama-valve womhlaba wonke, ama-valves ebhola, ama-plug valve, asetshenziswa kakhulu kuphrojekthi yePetroleum nakwimboni yamakhemikhali.
I-valve YEPHROJEKTHI YASOLWANDLE KANYE NEZIMBONI ZESHOSHA
Amaphayiphu we-anti-corrosion aphezulu afaka ama-valve esango, ama-valve wokuhlola, ama-valve womhlaba wonke, ama-valve webhola, ama-Butterfly valves ect, asetshenziswa kakhulu kuphrojekthi yamanzi olwandle nasembonini ye-offshore.
I-valve YOKUPHUZA AMANZI NOKUQHUBA
Ama-valve esango angenabo ubuthi, ama-valve wokuhlola, ama-valve e-Butterfly, ama-valve ect ect, asetshenziswa kakhulu ekuphuzeni iphrojekthi Yamanzi ephathekayo ngezinto ezivunyelwe ze-WRAS.
Ukuhlolwa okuphansi kokushisa kwe-cryogentic vale
Ukuhlolwa kokusebenzisa impilo kwenani lesango ngesihlalo se-EPM
Ngemibuzo mayelana nemikhiqizo yethu noma iphrojekthi kanye nethenda, sicela ushiye i-imeyili yakho kithi futhi sizothintana kungakapheli amahora angama-24.